Moe Kai: ဘဝရဲ. အခက်အခဲတွေ
တခြားပြောတဲ့ မျိုးရိုး (Gene Pool) ဆိုတာတွေလဲ ပါတော့ ပါတာပေါ့။ သူတို.ရဲ့ ကြွက်သား တည်ဆောက်ပုံ ဆိုတာတွေလဲ ရှိတာပေါ့။ ကြွက်သားတွေမှာ အမြန်အလုပ်လုပ်တဲ့ (Speed)ကို ပေးတဲ့ ကြွက်သားမျှင်နဲ. တာရှည်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ (Endurance) ခံတဲ့ ကြွက်သားဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ လူမဲ အများစုမှာတော့ Speed ကိုပေးတဲ့ ကြွက်သား အများစုနဲ. ဖွဲ.စည်းထားတယ်လို.တော့ သုသေသနမှာ ဆိုထားပါတယ်။
ဂျမေးကန်းတွေ အကြောင်းကြားပြီး တွေးမိတာကတော့ ဘဝမှာ လူတိုင်း အခက်အခဲတွေ အနဲနဲ. အများဆိုသလို ကြုံရမှာပါ။ ဘဝကို အလွယ် အရှုံးပေးတတ်သူတွေကတော့ လမ်းခရီးမှာပဲ တိုက်ပွဲမဝင်ခင် ကျဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေး စိတ်ရှိသူတွေ၊ သူများထက် ပိုကြိုးစားသူတွေ ကတော့ တွေ.သမျှ အခက်အခဲ တွေကို ကြိုးစား ကျော်ဖြတ်ရင်းနဲ. ဒီအခက်အခဲ ဆိုတာတွေကပဲ သူတို.ကို အကောင်းဆုံး အသန်အမာဆုံး လူသားတွေ ဖြစ်လာအောင် ပြုပြင်ပေးလာမှာပါ။ ဒါကြောင့် အခက်အခဲ နဲ. ကြုံတိုင်း စိတ်ညစ်မိတိုင်း ဒါဟာ ငါ့ကို စိတ်ဓါတ်ပို ခုိုင်မအောင် လုပ်ပေးတာပဲ တွေးပြီး ပိုလို.သာ ကြိုးစားဖြစ်မယ်ဆိုရင် ....။
ဘာရယ်မဟုတ် တွေးမိတာလေးတွေရယ်ပါ။ အားလုံးပဲ ဘဝ ခရီးမှာ အဆင်ပြေကြပါစေ။